Indima yeListric kwiMhlaba weMculo
Umculo Imfundo yoMculo
Umehluko phakathi komculi wengoma kunye nomculo weengoma
Ukubeka ngokukhawuleza, umculi ngumculi wengoma. Usuku lwangoku oluthile njengabaculi abadumileyo uJay-Z okanye iBrithani e-Indian indie eyaziwa ngamazwi abo kunye nekhono lokudibanisa amagama kunye nokuyibeka kumculo.
Umculi unokuthi uthathwa njengemagama esithethi, obhala amagama kwisimboli somculo, ungeze amagama kumculo osele ekhona okanye axoxe amagama engqamlezo ye-cappella.
Umculi udla ngokubambisana nabaculi beengoma , abaqambi , izicwangciso kunye namanye amavumi omculo.
Umehluko Phakathi kweLyriist and Songwriter
Umculi unendlela kunye namazwi kwaye akhulise amazwi ahambelana nomhlobo othile wokugcina umculo ekucingeni uhlobo, umxholo, ubude, kunye nesigqi somculo. Umntu obhala kuphela amagama ubizwa ngokuba ngumculo weengoma. Umntu obhala zombini umculo kunye namazwi kuthiwa ngumculi wengoma. Kwaye, ukuba ungumntu obhala amagama kumculo asetyenziswa kwii-opas, ngoko uyaziwa ngokuba ngumntu ongenanto.
Izikhokelo Zokubhala Iingoma
Ukuba ungumculi osebenza ngengoma yokubambisana, unokucelwa ukuba ubhale amagama kuqala nomculo wongezwa kamva. Okanye, kukho umculo okhoyo ukuba umculi angadinga ukuzalisa ngamagama. Kukho imiba emininzi eyenziwa ngumculi xa ebhala amagama:
Ingaba isihloko sengoma sibamba?
Ingaba yimigca embalwa yokuqala yoma ngoma enamandla okwaneleyo ukukhawuleza umdla wabamphulaphuli?
Ngaba la mazwi adlulisa ingcamango okanye umyalezo ngempumelelo?
Ngaba kukho isisombululo ekupheleni kwengoma?
Ngaba loo mazwi alandela umculo?
Iimfanelo zokufuna kwiListricist Good
I-lyricist efanelekileyo ingasebenzisa amagama ngendlela ezalisa umculo, inceda ukwenza ingoma ikhunjulwe kwaye ibangele ingqalelo kubaphulaphuli.
Ukuba ukhangele i-lyricist, izinto ekucingayo ziquka umculi osebenza kakuhle nabanye kwaye ngumntu onolwazi ngeendlela ezahlukeneyo zomculo kunye neendlela zomculo.
Iingcebiso zokungena kwiikopi Ukubhala
Ukuba unomngxube weengoma zeengoma kwaye ucinga ukuba le ndlela yomsebenzi iya kuba mnandi ukuba uphumelele, kukho izinto ezimbalwa eziza kukunceda ngendlela yakho.
Hlanganisa ulwazi oluninzi kunye nokuqonda kwiindidi zemimculo kunye neefom zomculo ezisehlabathini lomculo. Igama elifanelekileyo lomculo lomeleza isiqulatho sakho jikelele kwaye lunokukunika inzuzo ngaphezu kwabanye. Kubalulekile ukwazi indawo yokudlala. Yazi oko kushushu kwaye oko kungekho. Mamela ngokukhawuleza ukuhlaselwa kweeyure kunye nanamhlanje kwaye uhlole oko kwenza ingoma ibetha okanye i-flop.
Kwakhona, ukuba unemvelaphi yomculo esekelwe kwingcamango yomculo, ukukwazi kwakho ukufunda kunye nomculo nokulindela utshintsho lomculo kunye neepateni, kunokukwenza ukuba ube nexabiso elifanele ukutyalomali.
Unokuqala njengomgqwetha, ingoma yeengoma okanye i-wordsmith ezixabisa iintlobo ezahlukeneyo zomculo. Unako ukuhlawula ii-gigs ezimbalwa njengomculo weengoma. Musa ukumangaliswa xa uqala ukuphuma ukuze ubhale umculo. Le yindlela eqhelekileyo ininzi yama-lyricists athatha.
Indlela yomculo weengoma ingaba yi-stellar. Kukho abaninzi abarekhoda abarekhodayo abanobuchule beengoma kunye nabaculi bee-lyric, ezifana neJewel, uJohn Lennon , uSara McLachlan noStevie Wonder . Kukho iindlela ezahlukeneyo ze-intanethi eziza kulandela ukuqala njengebhanki engabhalwanga, umculi okanye umbhali.
Iipiyano kunye neKhobhodi yeShedi yoMculo ngabaQaleli
Malunga neDrum Bass
IiJazz Musical Instruments
Ngaba Iimfundiso Zemvelo Zifana Neenkolelo Zenkolo?
Kutheni Ukholelwa Iingxabano Zengxabano?
I-Novena kuSanta Benedict
Iikhosi zeNkolo zamaKhohla zamaHlabathi
Ngaba Iikitikiti Zibaleka Ebusika?
Funda nge-Doppler Effect
Imfazwe yokuqala ye-Italo-Ethiopia: Imfazwe yaseAdwa
Sebenzisa ii-Quickdraws kwi-Anchors yeMidlalo
Abaculi aba-10 be-Hip-Hop bajonge ngo-2013
Kutheni i-Disney ibeke iiBrakes kwi 'Wild Hogs 2'
U-John Patrick Shanley 'Ukungaqiniseki'
Iindaba ezili-10 ezinomdla kunye neengcamango ezingenakucaciswa
Funda Ukudibanisa Okulula "Ukumomotheka" (ukuSmile)
Iingoma ezigqwesileyo zokuzinzisa Intliziyo ephukileyo